SPS-FGB Fibre Glass Board Squeegee - China Changzhou Plet Pirinty natao
NAHOANA NO MAFIDY PLET
Squeegee indostrian'ny Photovoltaic
Squeegee momba ny indostrian'ny efijery
Squeegee fanontana lamba nentim-paharazana
Squeegee sandwich telo sosona
Squeegee ny indostrian'ny microelectronics
Grinder mandeha ho azy
Fitsapana fifandanjana tsindry Squeegee
Polisy antsy antsy sisitasy
Fixer scraper namboarina
Namboarina namboarina hiverina
talantalana fitahirizana scraper
testeran'ny hamafin'ny fingotra
Marika Japan Bando
Bando B-karazana squeegee
Bando P-karazana squeegee
Bando S-karazana squeegee
Na dia ny ankapobeny ny toe-karena mitotongana tamin'ny 2015, fa ny lamba fanaovana pirinty orinasa mbola tratra vokatra tsara, tamin'ny taona ity, ny ankamaroan'ny lamba fanontam-pirinty orinasa ihany koa amin'ny alalan'ny vokatra Optimization, harena fampidirana sy ny fiovana, nanantena ny haingana haka ny orinasa ny baiko avo, izay ihany koa ny mampirisika ny The fampandrosoana ny efijery orinasa fanontam-pirinty. Amin'izao fotoana izao, lamba fanontam-pirinty efa nohatsaraina bebe kokoa, ary nihatsara na amin'ny automatique teknolojia, fanomezan-toky tsara teknolojia, sy ny haavon'ny fitaovana sy ny fitaovana orinasa mpamokatra entana.
Ao amin'ny fampandrosoana ny efijery orinasa fanaovana pirinty, inks, tombantombana ny efijery fanontam-pirinty, ary ny milina fanontam-pirinty dia matetika ny ahiahy. Na izany aza, vitsy ny olona liana amin'ny fanontam-pirinty sy ny squeegee lamba. Na izany aza, ny squeegee Mandray anjara lehibe eo amin'ny fineness sy ny filaminana ny fanontam-pirinty. Ny anjara asan'ny. Changzhou Preet Printing Teknolojia Co., Ltd. (nohafohezina hoe "Platt") dia matihanina mpamatsy ny efijery consumables fanontam-pirinty. Eo ambany sasatra ny fikarohana sy ny asa mafy, SPS fametrahana mazava Screen fanaovana pirinty sy Squeegee no tsikelikely nahazo ny fankatoavana ny tsena sy ny orinasa. Tena malaza. Tamin'ny 2016, ny tena vokatra Pratt no SPS-FGB fiberglass fikikisana sy SPS-FGB-AS karbaona fibre antistatic fikikisana.
Ny mahatsara ny SPS-FGB fiberglass fikikisana dia ny fitaratra fibre birao manohana ny fikikisana lakaoly. Na dia ny fikikisana lakaoly dia alona ao amin'ny ranomainty nandritra ny fotoana ela, ny fanontam-pirinty tsy mora sembana. Noho izany, ny SPS-FGB fitaratra fibre board fikikisana lakaoly afaka manome ny tsindry mafy orina fanontam-pirinty. , Miovaova fanontam-pirinty fiolahana avo abrasion fanoherana sy solvent fanoherana, mety noho ny fametrahana mazava tsara lamba fanontam-pirinty orinasa toy ny tsara tsipika, teboka fanontam-pirinty, ary ny sarimihetsika hateviny fanaraha-maso toy ny hoe: mikasika lamba mainty sy fotsy fonony lamba fanontam-pirinty, ary aza mikasika efijery TP volafotsy sarimihetsika hatevin'ny fanaraha-maso (fahavaratra 8% Silver Mametaka), Home Appliance Decoration Industry Transparent Color & Dot fanontam-pirinty, Home Appliance Decoration Industry Pearl Powder Pirinty natao (Screen Pirinty natao tamin'ny Easy To Ink), Automobile Dashboard Industry kirihitra Inks sy mangarahara Color fanontam-pirinty, Light Guide lovia Industry Dot fanontam-pirinty, RF Label loatra Silver Line fanontam-pirinty, photovoltaic Grid tsipika fanontam-pirinty sy ny sisa.
SPS-FGB-AS karbaona fibre anti-voasakantsakan'ny squeegee tsy vitan'ny hoe manana ny tena fanatanterahana FGB fiberglass squeegee, dia mety ihany koa ny hanafaka voasakantsakan'ny herinaratra niteraka fanontam-pirinty nandritra ny dingana. Satria ny SPS-FGB-AS anti-voasakantsakan'ny karbaona fibre fikikisana lakaoly na ny fanaka conductive entona karbaona fibre birao sy ny anti-voasakantsakan'ny AS fikikisana lakaoly, AS fikikisana fingotra dia afaka soa aman-tsara mampihena ny fikikisana fanoherana sarobidy ny 10 MΩ, izay azo navoaka mandritra ny fanontam-pirinty dingana. Ny voasakantsakan'ny herinaratra, mba tsy electrostatic fanangonan-karena ao amin'ny efijery dingana fanontam-pirinty sy ny tranga ny manatona sy manidina ranomainty, izay be dia be kokoa ihany koa ny kalitaon'ny ny vokatra.
Quality manome hafanana ny vokatra, taratry ny orinasa ny toetrany, ary koa ny tombony ho an'ny fampandrosoana ny orinasa. Fa ny kalitaon'ny vokatra, Prete-maso hentitra akora, mandany dingana famokarana siantifika, ary manome fomba hentitra fitiliana. Avy amin'ny fomba fijery ny tsena anjara, ny tetikady Pret efa nahavita vokatra tsara indrindra. Fa ny mavesatra Pret fitaovam-piadiana dia tsy voafetra ho amin'izany. Tamin'ny vanim-potoana ny asa fanompoana-mirona traikefa, Pretto mametraka ny fanompoana aloha teo amin'ny fampandrosoana ny orinasa, ary manana harato sy feno barotra mialoha ny varotra sy Ankehitriny-varotra rafitra fanompoana. Online mialoha varotra ara-teknika dia afaka atao fakan-kevitra amin'ny aterineto sy ivelan'ny aterineto na fantsona, ary ny lahatra drafitra sy Ankehitriny-penitra varotra tolotra azo nahazo mandritra amidy, ka hanome fahafaham-po ny mpanjifa fepetra takiana ho ambony indrindra araka izay azo atao. Pratt ny iraka: ny fampidirana ny lamba landy pirinty vokatra vaovao, dingana vaovao, sy hampiroborobo ny fampandrosoana ny indostrian'ny lamba lasoà.
Adiresy: afovoany 21A ， QingyangRoad NO.1 ， Changzhou City, faritanin'i Jiangsu ， Sina
© Copyright - 2010-2018: Voatahiry ny Zo rehetra.